चुनावमा वैधानिक खर्च ४५ अर्ब, अदृश्य खर्च कति ? — janadristi
२८ वैशाख २०७९, बुधवार १७:१२
२८ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक ७५३ स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ । अहिले देशभरका मतदाता आफ्नो नजिकको सरकार चयनका लागि मत व्यक्त गर्ने तयारीमा छन् ।
७५३ स्थानीय तहमा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य गरी ३५ हजार २१२ पदका लागि एक लाख ४५ हजार १५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यी उम्मेदवरले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रको रकम खर्च गर्दा यो चुनावमा उम्मेदवारबाट २९ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडाध्यक्षका उम्मेदवारका लागि अलग अलग चुनाव खर्च तोकेको छ ।
हिसाबमा नआउने अदृश्य खर्च
निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले सवारी साधनमा एक लाख ५० हजार, सवारी इन्धनमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामग्रीमा एक लाख र ढुवानीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख ३९ हजार, छापा तथा विद्युतीय प्रचारप्रसारमा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा एक लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र विविधमा २५ हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाका उम्मेदवारको खर्च शीर्षक यही नै छ, तर खर्चको गर्न पाउने रकम झन् कम छ ।
चुनावमा हुने खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहन्छ भन्ने विश्वास न उम्मेदवारलाई छ, न सर्वसाधारणले पत्याउँछन् । ०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका कतिपय नेताहरुले आयोगले तोकेको सीमा भन्दा अत्यधिक खर्च भएको सार्वजनिक रुपमै बताउनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
नवलपरासी पूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शशांक कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ०७४ सालको निर्वाचनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए ।
पर्वतबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि पोखरामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आफूले खर्च विवरण ढाँटेर आयोगमा बुझाएको बताएक थिए ।
२७ फागुनमा निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले वडाअध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च नै २०–२५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्ने बताएका थिए । यद्यपि आयोगले महानगरको वडाध्यक्षका उम्मेदवारको खर्च सीमा तीन लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
०७४ सालमा गुल्मीको एक स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष जितेका एक नेताले ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अनलाइनखबरसँग बताएका थिए ।
अर्थविद् लालशंकर घिमिरे निर्वाचनका बेला धेरै पैसा बाहिर निस्कने र गाउँतहसम्म पुग्ने हुनाले अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिने बताउँछन् । यद्यपि उनी उम्मेदवारले गर्ने फजुल खर्चले विकृति ल्याउने उनको भनाइ छ ।
प्रत्येक चुनावपिच्छे बढ्दैछ खर्च
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण ३१ वैशाख २०७४, दोस्रो चरण १४ असार २०७४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन २ असोज २०७४ मा भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार ०७४ सालमा सवा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यस पटक आयोगले मात्र ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको स्रोत सुनिश्चितता लगेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव खर्च उम्मेदवार स्वयंले व्यहोर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले आर्थिक सहयोग गर्दैनन् । नेकपा एमालेका नेता प्रा।डा‍। पुष्पराज कँडेल उम्मेदवारले आफैं वा स्वदेश तथा विदेशका शुभचिन्तकबाट रकम उठाएर चुनाव खर्च जुटाउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रा. डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार उम्मेदवारहरु आफैले खर्चको जोहो गरेर निर्वाचनमा होमिएका हुन् । सकेसम्म सीमाभित्रै रहेर खर्च गर्न उम्मेदवारलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङका अनुसार माओवादी केन्द्रले पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनमा कुनै पनि उमेदवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा नाघेर खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेत नभएका कारण त्यो सीमा माओवादी केन्द्रका उमेदवारले ननाघ्ने उनको भनाइ छ । ‘क्षमता भएका साथीहरुले सीमा ननाघ्ने गरी खर्चको जोहो आफैं गर्नुभएको छ’, उनले भने ।
सुधारको प्रयास, अनुगमन कसले गर्ने ?
निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनबाट उम्मेदवारले गर्ने चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न भनेको छ । निर्वाचन आचारसंहितामा यस पटक चुनावमा गरिने खर्चका लागि उम्मेदवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
उम्मेदवारले खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलको हकमा समेत चुनाव सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक खातामार्फत दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख रहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा यसलाई नैतिकतासँग जोडेर हेर्न सुझाव दिन्छन् । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने हो भने राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सरोकारवाला नैतिकवान बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आचारसंहितालाई सबैले पालना नगर्ने हो भने आयोग एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि तोकिएको भन्दा बढी खर्च भएको प्रमाण भेटिए कारवाही हुन्छ ।’